विश्वको ध्यान खिच्दै जापानी भेन्डिङ मेशिन – Korea Pati
June 17, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on विश्वको ध्यान खिच्दै जापानी भेन्डिङ मेशिन
विश्वभर पछिल्लो समये भेन्डिङ मेशिनको प्रयोग बढेको छ । कयौं भेन्डिङ मेशिनको ‘फ्रन्ट रनर’ जापान भएको विश्वास गरिन्छ ।
चाहे स्टेशन होस् वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा अस्पताल किन नहोस् जहँ पनि भेन्डिङ मशिन देख्न सक्नु हुनेछ । भेन्डिङ मेशिनलाई विशेषतः पेय पदार्थ किन्न सकिने मेशिनका रुपमा चित्रण गरिएकोे छ ।
तर जापानमा यो यतिमै सीमित छैन । यसबाट रक्सी, चुरोट, तरकारी र फलफूल, ताता भुटेको आलु, रामेन लगायत अनगिन्ती चिज किन्न सकिन्छ । यो सुनेर तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य हो । आजको यस लेखमा जापानी भेन्डिङ मेशिनको संसारबारे बताउन गइरहेका छौं ।
भोक लागेको छ ?
भेन्डिङ मेशिनबाट पेय पदार्थ मात्रै होइन कहिलेकाँही मिठाइ पनि पाइन्छ । चुइङ गमदेखि क्यान्डीसम्म अनि चकलेट देखि आलु चिप्स सम्म विविध प्रडक्ट पाइन्छ । यी वस्तुहरु किन्न पसलसम्म जानै पर्दैन । जापानी चिनारी झल्काउने स्थानीय विशेषता भएका वस्तु समेत यस्ता भेन्डिङ मेशिनबाट किन्न सकिन्छ ।
ताजा तरकारी र फलफुल चाहियो ?
नेपालमा हामीले तरकारी बजार, सुपरमार्केट वा अन्य किराना पसलबाट तरकारी र फलफुल किन्न सक्छौं । तर जापानमा भने यी सामानहरु भेन्डिङ मेशिनमै पनि पाइन्छ । यी मध्ये धेरै क्वाइन लकर जस्तै देखिन्छन् । प्वालमा पैसा हालेर आफूलाई के चाहिएको हो रोज्नुहोस् । तपाइले छान्नु भएको वस्तु मेशिनले निकालेर दिन्छ । ठूला शहरका गल्ली र सडकका किनारामा कयौं तरकारी र फलफुलका मेशिन राखिएका छन् । यहाँ तपाइले किसानले खेतबारीमा उब्जाएको ताजा तरकारी र फलफूल किन्न सक्नु हुनेछ ।
पछिल्लो समय अन्य शहरमा पनि तरकारीको भेन्डिङ मेशिन राखिएका छन् । टोकियोको शिबुया स्टेशनमा डोल प्रजातिको केरा बेच्न भेन्डिङ मेशिन जडान गरिएको कुरा बारे निकै चर्चा चलेको थियो । खाजा वा स्न्याक्सका रुपमा केरा खान खोज्नेले सहजै मेशिनबाट किन्न सक्ने भएकोले पनि यसप्रति धेरैको ध्यान गएको थियो । अहिले धेरैले तरकारी र फलफुल किन्न भेन्डिङ मेशिनको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ ।
फुल लाइन मेनु
तपाइलाई भोक लागेको बेलामा केही किन्न भेन्डिङ मेशिन निकै सजिलो माध्यम हो । यसमा पाइने खानेकुराको सूचि भुटेको आलु वा हटडग जस्ता हल्का खाजामा मात्रै सीमित छैन । उदोन र रामेन चाउचाउ पनि पाइन्छ । मेशिन आफैंले यस्ता खानेकुरा बनाउँछ । यसलाई घरमा ल्याएर पकाइरहनै पर्दैन । कतै दृश्यावलोकन गर्न गएको बेलामा, वा टहल्न वा घुम्न गएको बेलामा वा कुनै खेल प्रतियोगिता हर्न बाहिर गएको बेलामा यस्ता मेशिनबाट तात्तातो रामेन वा उदोन किनेर खान कति सजिलो छ । हैन त ? भेसिनले मौलिक जापानी खाना ओदेन पनि क्यानमा राखेर बेच्छ । ओडेन सडकमै पनि खान सकिने बनाउन यसलाई क्यानमा राख्न थालियो । सन् १९९० को दशकमा यसको लोकप्रियता चुलियो । अहिले पनि मानिसहरुले मेशिनबाट यस्ता ओदेन किनेर खान्छन् । क्यानमा आउने ओदेन दाइकोन (मूला) र बिफलाई जापानी ब्रोथमा डुबाएर राखिएको हुन्छ ।
घरमै केही भुले जस्तो लाग्यो ? पिर गर्नु पर्दैन !
अचानक पानी पर्न थाल्यो । तर तपाइले घरबाट निस्कँदा ब्यागमा छाता हाल्न बिर्सनु भयो । पिर गर्नु पर्दैन । जापानका केही स्टेशनहरुमा छाता बेच्ने भेन्डिङ मेशिन समेत छन् । तपाइले यसबाट किनेर छाता ओड्न सक्नु हुन्छ ।
दाँत माझ्ने ब्रस, अन्डरवेर आदि नि ?
तपाइ कतै घुम्न जानु भयो । तर साथमा टूथ ब्रस लगायत अत्यावश्यक सामाग्री भने लैजानु बिर्सनु भयो । तर पिर गर्नु पर्दैन । जापानमा तपाइले भेन्डिङ मेशिनबाटै दाँत माझ्ने ब्रस, अन्डरवेयर, तौलिया लगायत वस्तु किन्न सक्नुहुन्छ । अचानक कतै जानु भएको छ भने पनि तपाइको मद्दतका यस्ता मेशिन छन् । मेशिनमा स्याम्पु, शेभिङ रेजर जस्ता नुहाउन र आफूलाई सफा राख्न चाहिने वस्तु पनि पाइन्छ ।
प्रयोग गर्न अति सहज भेन्डिङ मेशिन
भेन्डिङ मेशिनबाट माथि बताइएका बाहेक अन्य सामान पनि किन्न सकिन्छ । तपाइले जुनसुकै समयमा यस्ता मेशिनबाट खानेकुरा, अत्यावश्यक वस्तुहरु किन्न सक्नु हुन्छ ।
रक्सी र चुरोट चाहिएको छ ?
कहिलेकाँही तपाइलाई चुरोट वा रक्सी वा अन्य पेय पदार्थको तलतल लाग्न सक्छ । तपाइले यहाँ यी वस्तु भेन्डिङ मशिनबाट लिन सक्नु हुनेछ । केही देशमा भवनभित्रै चुरोटको मेशिन राखिएका हुन्छन् । तर जापानमा भने बाहिर नै चुरोट रक्सी पाउने यस्ता मेशिन राखेको देख्न सक्नु हुनेछ । यी मेशिनमा यति धेरै फरक फरक ब्रान्ड राखिएका हुन्छन् कि तपाइ हेरेरै दंग पर्नु हुनेछ ।
तर जापानमा यी वस्तु सेवन गर्न पाइने वैधानिक उमेर भनेको २० वर्ष वा सो भन्दा माथि छ । हालैका वर्षमा भेन्डिङ मेशिनबाट नाबालिगहरुले यस्ता वस्तु किन्नमा प्रतिबन्ध लगाउन सवारी चालक अनुमति पत्र र आईसी कार्ड (तास्पो) देखाउनु पर्छ । धेरैलाई यो झन्झटिलो लाग्न सक्छ । तर यो आवश्यक छ ।Nepali in Japan